Mayelana NATHI - HEBEI ENGE BIOTECH CO., LTD
U-ENGE Wazalelwa Ezolimo
I-Enge Biotech itholakala eShijiazhuang Hebei, eChina. wabandakanyeka ekukhiqizeni ama-agrochemicals kubandakanya ama-Insecticides, ama-Herbicides, ama-fungicides, izilawuli zokukhula kwezitshalo, Ukulawulwa kwezinambuzane zezempilo zomphakathi, abaxhumanisi bezibulala-zinambuzane kanye nomanyolo .. Ifakwe amasethi amaningi womugqa wokukhiqiza osezingeni eliphakeme we-TC, SC, WDG, DF, WP, SP, EC, EW , SL, ME, GR, njll. Amaqembu ethu anolwazi olungaphezu kweminyaka engama-20 lokukhiqizwa kwezibulala-zinambuzane. Sekela ukubhaliswa kwezinto ezingaphezu kwe-50 (ICAMA) nangamandla amakhulu kumkhiqizo omusha we-R & D.
Ikhwalithi Yimpilo Yenkampani Yethu. Imikhiqizo ye-Enge Biotech konke kusuka kubaphakeli abathembekile, abaqinisekisiwe, amafektri ethu alawula ikhwalithi yemikhiqizo ngokuqinile, ngemishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme emhlabeni, sithuthukisa futhi sakha ngendlela efanele, siqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu nezinqubo zokukhiqiza zihambisana nezindinganiso zekhwalithi eziqine kakhulu.
Ukuhlangabezana nezindinganiso ze-FAO, futhi uzame konke okusemandleni ukuhlangabezana nezidingo zekhwalithi ekhethekile yekhasimende.
Ukunikeza amakhasimende ngemikhiqizo ephephile, esebenziseka kalula futhi esebenziseka kalula.
Ukunikezela ngamakhasimende ngemikhiqizo nezinsizakalo zesikhathi eside, ezinzile nezisimeme.
Isekelwa uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi kanye namashumi eminyaka wesipiliyoni. U-Enge Biotech uthumele izinhlobo ezingaphezu kuka-100 zemikhiqizo ngochungechunge lokwakheka emazweni angaphezu kwama-30, izimakethe ezinkulu yi-Asia, North America, South America, Africa kanye neRussia. Sithole udumo oluhle ngenxa yemikhiqizo esezingeni eliphezulu nezinsizakalo ezinhle kakhulu.
Ukulima Yinto Enkulu Emhlabeni
Inani lethu nenhloso yethu ukucebisa izimpilo zalabo abakhiqizayo nalabo abadlayo, ukuqinisekisa inqubekelaphambili yama-generator azayo, i-Enge Mission ukukhiqiza ukusebenza kahle kakhulu, izibulala-zinambuzane ezinobuthi obuncane kanye nezinsalela eziphansi, Vikela impilo yezitshalo nempilo yomphakathi, zikhule ndawonye namakhasimende womhlaba wonke.